Story Our - Digital Manufacturing Co., Ltd.
Shanghai Digital Manufacturing Co., Ltd (SHDM) (wemari code: 870857) yakavambwa muna 2004, ari yepamusorosoro zvebhizimisi uyewo academician workstation muShanghai. SHDM ari nyanzvi kambani kufunga R & D, kugadzira, rokutengesa ose yepamusorosoro 3D vaidhinda uye 3D scanners uye kupa zvinonakisa 3D kudhinda mhinduro. SHDM ari makuru ari maindasitiri nzvimbo Brilliant City, Pudong
dunhu, yakabatana vomuzana kirasi dzakawanda makambani mazhinji. SHDM akagadza bazi makambani uye mahofisi muguta Chongqing, Xiangtan, Tianjin, Ningbo, Shenzhen, etc.
SHDM parizvino ane vashandi vanopfuura 70 uye vanopfuura 20% vane Masters kana madhigirii raChiremba. Industrial SL 3D aidhinda uye white- chiedza scanner, Laser muviri scanner akaongorora uye kugadzirwa boka redu kutungamirira naDr Zhao nokusingaperi akahwina National Awards dzekirasi wechipiri Scientific uye muruzivo rwokugadzira Mberi uye Shanghai Award nokuda Scientific uye muruzivo rwokugadzira Mberi. Kunze, SHDM yakatangawo SLM simbi 3D, aidhinda nhevedzano maindasitiri FDM aidhinda uye zvedongo 3D purinda. SHDM muridzi zvinopfuura 20 patents ose kwesayenzi zvigadzirwa uye Software Copyrights.
Kubvira panheyo, SHDM unobereka basa "Digital Manufacturing anoshandura World" uye achingoramba basa pfungwa "Kufunga Manufacturing, Zvainyanya Service" uye akamisa rakasiyana muchiso kuti "SHDM" kuburikidza kwemakore anopfuura 10 painstaking tsvakurudzo & kukura, ruzivo kuwanda, michina yemhando yepamusoro, yemhando yepamusoro uye akakwana basa gadziriro. SHDM inopa yepamusoro zvinhu uye kushumira dzakasiyana-siyana mudzimba uye dzomunyika emakambani, mumakoreji uye sainzi & tsvakurudzo masangano akadai Shanghai Jiao Tong University, General Motors Cooperation, Chengdu Aircraft Research Institute, Senyuan Group, Central Academy of Arts Fine, The wechina Military Medical University nezvimwewo, kufukidza akasiyana-siyana maindasitiri kusanganisira maindasitiri kugadzira, zvokurapa, motokari, robhoti, Aerospace, dzidzo uye kwesainzi, nezvavaitsanangura, tsika okugadzira zvinhu, individualization etc.
Year1995: raparurwa yokutanga Gem purinda
Year 1998: Won mubayiro musayenzi uye kwesayenzi nebudiriro kirasi reBazi Redzidzo rokutanga
Year 2000: Dr. Zhao aikunda National Award pamusoro 2nd Kirasi Progress Scientific
Year 2004: SHDM kambani yakavambwa
Year 2014: Award pamusoro 2nd Kirasi Shanghai muruzivo rwokugadzira michina
Year 2014 : Chigaro inokosha pamwe Stratasys
Year 2015 : chikamu wakateya 3D rokudhinda mureza
mu Africa uye mumakoreji
Year 2016: Dr. Zhao yakava nhengo komiti kuti National
Year 2017: SHDM akanga akanyorwa pamusika wemari kuti NEEQ (Stock No.:870857)